जो हिल। राजाहरू अझै आतंकका राजाहरू हुन् वर्तमान साहित्य
जो हिल। राजाहरू अझै आतंकका राजाहरू हुन्
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | लेखकहरू, नोभेला, आतंक
जो हिल ती लेखकहरू मध्ये एक हो जसले केवल लेख्न सक्दछन् डरलाग्दा उपन्यासहरू। पहिलो, किनभने तपाईले उसको अनुहार मात्र हेर्नुपर्दछ ताकि उसले हामीलाई कसैको सम्झना गराउँदछ। र दोस्रो किनभने, वास्तवमा, कोही उसको बुबा स्टीफन कि is हुनुहुन्छ। तर केटाले सुरु गरेको बखत यो लुकाउन चाहान्थ्यो, सधैं असभ्य तुलनाहरूको कारण। सम्म, एक पटक ऊ सफल भयो भने, उनी उप्रान्त यस चिनिने बारे चिन्तित हुँदैनन्।
जोसेफ हिलस्ट्रम किंग विरासतमा आएको छ आतंक विष रगतको विष र उनले लेखकको रूपमा उत्कृष्ट क्यारियर पनि बनाएका छन् उत्कृष्ट विक्रेता एक विधाको जुन सधैं आकर्षण गर्दछ। त्यो उसको बुबाको छाया यो धेरै ठूलो छ? ठिक छ, त्यहाँ सबैको लागि स्वादहरू छन्। र जो एक गाह्रो समय चाहान्छन्, कि त्यहाँ एकै परिवारबाट दुई प्रतिभावानहरू छन् वा तिनीहरू उही समान हुक गर्न सक्छन्, राम्रो, राम्रो भन्दा राम्रो। त्यहाँ जान्छ उनका केही पुस्तकहरूको समीक्षा.
2 केहि पुस्तकहरु
2.1 मृतको सूट
म एक गर्मी मा जो हिल आएका थिए। तपाईं बिदामा जानुहुन्छ र तपाईं चाहनुहुन्छ चोरी पढ्ने। मैले यसका साथ डेबिट गरिसकेको छु मृतको सूट, २००,, र, यद्यपि मैले पहिले नै धेरै पटक गणना गरेको छु म डरलाग्दा विधाको होइन, म प्राय: समय-समयमा केहि पढ्छु। त्यसैले मैले लिएँ पकेट संस्करण समुद्र तटमा। र मलाई मन पर्छ। पनि मलाई नराम्रो समय थियोअवश्य पनि, र उनी जान्दैनथे कि उनी को छोरो हो स्टीफन राजाजसको बारेमा मैले केहि पढेको छैन तर स्पष्टसंग मैले केहि देखेको छु हजार रूपान्तरण उनीहरूको कथाहरूको।
हिल उस्तै बाटोमा जान्छ, दुबै बेस्टसेलर र संस्करणहरूमा सिनेमाको लागि उनका किताबहरूको। डरलाग्दो अलौकिक कुरा राम्रो कहानीसँग मिल्दछ जुन समात्छ र तिनीहरू राम्रोसँग पढ्न सक्छन्, शैली वा कथा गुणको रूपमा रॉकेट नचढाईकन, मानौं। उनले विधामा पनि काम गरेका छन कथा con भूतहरू र त्यो हास्यसंग लक र कुञ्जी। त्यहाँ पहिले नै धेरै शीर्षकहरू छन्, तर म यी तीन समीक्षा गर्दछु।
उनको उपन्यास द्वारा debut, कथा बताउँछ जुड कोयन, एक सेवानिवृत्त रक स्टार। ऊ हवेलीमा बस्छ उसको प्रबन्धक र उनी भन्दा कान्छी प्रेमिकाको साथ। र यो छ सor्कलनकर्ता सम्बन्धित वस्तुहरूको अलौकिक। त्यो शौक उसलाई नेतृत्व गर्नेछन् एक भूतमा बोली एक अनलाइन लिलामीमा, र केही दिन पछि, उसले मृत व्यक्तिको सूट समावेश गरेको अजीब हृदय आकारको बक्स प्राप्त गर्दछ। र हो, त्यो भूत, क्र्याडक, यो देखिन लामो समय लिने छैन। पहिले, धेरै सूक्ष्म तरिकामा तर चाँडै यो धेरै हुनेछ धम्कयाउने। जब उसको म्यानेजरले आत्महत्या गर्छ, कोयन र उसकी प्रेमिका आफ्नो जीवन बचाउन भाग्न निर्णय। तर यो कुनै पनि सजिलो हुँदैन।
उसको थियो segunda उपन्यास र यसमा नायक एक हो मानिस एक दिन ऊ भोजमा राती पछि एकदम हन्गोभर ब्यूँझन्छ। त्रासको साथ, उसले यो निधारमा पत्ता लगाउँछ शैतानी सी hornहरू बाहिर आयो र त्यो, थप, एक शक्ति अलौकिक तपाईं अनुमति दिन्छ विचारहरू पढ्नुहोस् अरूको सबैभन्दा अकथनीय।
पहाड उठ्छaचरण Casi apocalyptic कता प्लेग अज्ञात मूल को चारैतिर फैलिएको छ। डाक्टरहरूले यसलाई "ट्राइकोफिटन ड्रेको इन्सेन्डिया" भन्छन्, र बाँकी विश्वमा यो ड्र्यागन स्केल, एक बीजाणु यसले उनीहरूलाई बनाउनु अघि कालो र सुनको दागले संक्रमितको छालालाई चिन्ह लगाउँदछ आगोको ज्वालामा फोड। र त्यहाँ कुनै उपचार वा औषधी छ।
नायक हो हार्पर ग्रेसन र उनी नर्स थिइन्। उनी विवाहित छन्, अस्पतालमा काम गर्छिन् र बिरामीहरूको उपचार गर्दछिन् जसलाई उनले प्राय: जलेको दाउरा देख्छन्। जब उनी संक्रमित हुन्छन्, उनी गर्भवती हुन्छि र उनको पतिले कठोर निर्णय लिन्छ, हार्परले निर्णय गर्छ कि ऊ बाँच्न चाहन्छ र भाग्छ। तर उसलाई यो पनि थाहा छ जोन रुकवुड, एक अनुमानित फायर फाइटर त्यो पनि संक्रमित भए पनि, जल्दैन र आगो सल्काउन र प्रयोग गर्न सिकेको छ संक्रमितलाई हटाउन चाहनेहरूको बिरूद्ध शिकार र हतियारको रूपमा। ती दुई एकै किसिमको लुकेका शिविरमा मिल्नेछन् जहाँ बिरामीहरूले शरण लिन्छन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » लेखकहरू » जो हिल। राजाहरू अझै आतंकका राजाहरू हुन्
ईवा गार्सिया सेन्ज द्वारा लामो समयसम्म बाँचेको गाथा
रामोन डेल भाले-इनक्लुन, जीवनी र कार्यहरू